Kaalmada Cunnada - UNHCR Egypt
Ogolaanshaha degenaanshaha Masar
Sahanka Qiimaynta Baahida Degdega ah (RNA)
Xadgudub ku salaysan jinsiga
Go’aaminta Xaaladda Qaxoontiga
Shahaadooyinka Dhalashada ee Dhallaanka
Hay’adaha Iskaashiga ee UNHCR
St. Andrew’s Refugee Services (StARS)
Daryeel / Care
Mu’asasada Masar ee Xuquuqda Qaxootiga (EFRR)
Adeegyada Gargaarka Katooliga (CRS)
Qaxooti Masar-Refuge Egypt
Ururka Caalamiga ah ee Socdaalka (IOM)
Ka warbixinta been abuurka iyo dhaqan xumada
Halka lagala soo xiriirayo
Yaa xaq u leh in la siiyo kaalmada WFP?
Guud ahaan, u-qalmitaanka helitaanka gargaarka WFP waxaa lagu go’aamiyaa habka bartilmaameedka, kaas oo ku xiran ilo badan oo macluumaad ah, oo ay ku jiraan macluumaadka la heli karo marka aad iska diiwaan geliso UNHCR, iyo mararka qaarkood macluumaadka lagu ururiyo wareysiyada qiimeynta.
Go’aanku wuxuu tixgelinayaa dhowr arrimood oo la isku daray, oo ay ku jiraan xaaladda dhaqaale, tirada xubnaha qoyska, sahlanaanta helitaanka kaalmooyinka kale, baahiyaha gaarka ah, khatarta ilaalinta, xaaladaha caafimaad, iyo arrimo kale oo badan.
Kadib, dhammaan kiisaska waxaa la barbardhigayaa in la aqoonsado qoysaska aadka u nugul, kuwaas oo ka hooseeya xariiqa faqriga oo ay la kulmaan khataraha la xiriira ilaalinta. Waa qoysaskan jilicsan kuwa ay markaas aqoonsatay oo ay taageerto WFP.
Sideen isku diiwaan gelin karaa kaalmada WFP?
Qaxootiga xaqa u leh in ay helaan gargaarka cuntada ee WFP waxaa aqoonsaday UNHCR (kuwa la qiimeeyay lana aqoonsaday in ay yihiin kuwa ugu nugul) waxaana liiska gargaarka lala wadaagaa WFP.
Kaalmada nafaqeynta ee haweenka uurka leh iyo kuwa kalkaalisada ah
Hooyooyinka qaxootiga ah ee haysta carruurta da’doodu ka yar tahay 2 sano ama haweenka qaxootiga ah ee uurka leh waxay iska diiwaan gelin karaan gargaarka nafaqeynta ee WFP marka codsiyada la furo oo la soo geliyo bogga Facebook ee WFP (link here).
Haweenka qaxootiga ah ee u qalma in ay helaan gargaarka nafaqeynta ee WFP waxaa sidoo kale aqoonsatay UNHCR (kuwa la qiimeeyay lana aqoonsaday in ay yihiin kuwa ugu nugul) waxaana liiska gargaarka lala wadaagaa WFP.
* Hadda, codsiga gargaarka nafaqeynta waa xiran yahay.
Loogu talagalay barnaamijka Cunnada Tababarka
Marka la helo, xiriirinta codsiyada barnaamijka Cunnada Tababarka waxaa lagu xayaysiiyaa bogga WFP ee Facebook-ga (halkan), iyada oo loo marayo Hogaamiyeyaasha Bulshada iyo la-hawlgalayaasha WFP. Codsiyada waxay u furan yihiin dhammaan qaxootiga iyo xubnaha bulshada martida loo yahay.
Shuruudaha xulashada koorsada nooc kastaa way kala duwanaan doontaa iyadoo lagu salaynayo shay la xidhiidha dhinaca khibradda koorsada ama tababar kasta.
*Hadda, codsiga barnaamijka cuntada ee tababarka waa xiran yahay.
Gargaar noocee ah ayay WFP siiso qaxootiga?
WFP waxay siisaa 3 nooc oo gargaar ah qaxootiga ku nool Masar. Kuwani waa:
Kaalmada cuntada ee WFP ee qaxootiga waa lacag caddaan ah oo qof kasta lagu wareejiyo oo laga soo furan karo dukaamada tafaariiqda ee lammaanaha ama lacag caddaan ah oo laga soo iibsan karo in ka badan 140,000 dhibcood oo iib ah oo dalka oo dhan ah iyada oo loo marayo kaarka ka faa’iidaysiga shakhsi ahaaneed.
Caawimadan waxaa la siiyaa bil kasta qaxootiga loo aqoonsaday inay yihiin kuwa ugu nugul (fadlan tixraac su’aasha 2 ee shuruudaha bartilmaameedka si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan shuruudaha nuglaanta).
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan habka madax furashada waxaa lala socodsiiyaa ka faa’iidaystayaasha shakhsi ahaan iyo iyada oo loo marayo macluumaadka xiriirka diiwaangashan marka la helo gargaarkan markii ugu horeysay.
WFP waxa ay bil kasta siisaa lacag caddaan ah oo ay siiso haweenka uurka leh iyo kuwa kalkaalisada ah ee qaxootiga ah (ilmaha da’doodu ka yar tahay 2 sano jir) si loogu soo furto dukaamada tafaariiqda ee lammaanaha ama lacag caddaan ah iyada oo loo sii marayo kaarka ka-faa’iidaysiga shakhsi ahaaneed ee ka badan 140,000 dhibcood oo iib ah waddanka oo dhan. Kulamo wacyigelin ah oo ku saabsan nafaqeynta ayaa sidoo kale la bixiyaa si kor loogu qaado nafaqeynta habboon iyo samaqabka hooyooyinka la caawiyo iyo carruurtooda yaryar.
Barnaamijka Cuntada Tababarka
WFP waxa ay bixisa waxqabadyo dib-u-dhis ah, iyada oo kor u qaadaysa wada-jirka bulshada ee qaxootiga nugul iyo xubnaha bulshada martida loo yahay. Si wada jir ah, WFP iyo la-hawlgalayaasheeda ayaa bixiya tababaro xirfadeed oo ku saabsan dhinacyada kala duwan ee shaqada.
Ujeedada barnaamijku waa in lagu taageero qaxootiga iyo xubnaha bulshada martida loo yahay si ay u helaan shahaadooyinka iyo shahaadooyinka loo baahan yahay si ay dakhli u helaan.
Marka ay xaadiraan 80% wareegga koorsada bilaha ah, kaqeybgalayaashu waxay helayaan kaalmo lacag caddaan ah bishiiba halkii dakhli kasta oo ay horay u sii saadaaliyeen inta ay ku jiraan barnaamijka.
* Si kastaba ha ahaatee, dhaqaale la’aan awgeed, barnaamijka cunnada ee WFP ee tababarka hadda waa la joojiyay ilaa laga helayo maalgelin dheeraad ah. Marka barnaamijka dib loo bilaabo, ka faa’iidaystayaasha waxaa lagu ogeysiin doonaa bogga Facebook ee WFP (link here), kooxda shaqada ee UNHCR ee hab-nololeedka iyo hoggaamiyeyaasha bulshada qaxootiga.
Sideen ula xiriiri karaa WFP ee Masar?
WFP ma awoodo inay ka-faa’iideystayaal ku qaabisho xafiisyadooda. Waa inaad wacdaa lambarka telefoonka (hoos) ama tixraac bogga Facebook ee WFP (hoos) wixii su’aalo ah.
Qadka WFP: 02-25299830 / 01023646706 | Lambarka bilaashka ah: 08005555222
WFP bogga Facebook ee gargaarka qaxootiga: https://www.facebook.com/WFPassistancetorefugees/
Bogga Facebook-ga WFP waxa ay ku shaacisay:
Taariikhaha soo furashada gargaarka qaxootiga WFP
Macluumaadka ku saabsan isbedel kasta oo la xiriira habka madax furashada
Macluumaadka ku saabsan sida loo soo furto gargaarka qaxootiga WFP
Codsiyada kala duwan ee hawlaha gargaarka qaxootiga WFP
Links to portals racfaanka
Digniinaha ka dhanka ah fariimaha been abuurka ah ama macluumaadka beenta ah
Sideen ku ogaan karaa in la ii doortay in aan helo kaalmada WFP?
Haddii laguu doorto nooc kasta oo ka mid ah gargaarka WFP waxa lagugu soo sheegi doonaa doorashadaada iyo waxa aad xaqa u leedahay iyada oo loo marayo tafaasiisha xiriirkaaga diiwaangashan.
Sideen ku soo gudbin karaa cabasho?
Wixii cabasho ah oo aad qabto waxaad ku soo diri kartaa fariin toos ah boggayaga Facebook-ga (ku xidhnow halkan), waxaanu kuugu soo jawaabi doonaa 48 saacadood gudahood.
WFP miyay sii wadaa bixinta boonooyinka cuntada ee qaxootiga iyo magangalyo doonka?
WFP waxa ay sii waddaa taageerada ay siiso qaxootiga iyo magangalyo-doonka nugul. Waxaan fahamsanahay sida ay muhiimka u tahay kaalmadayada iyo in qaxootiga nugul iyo magangelyo-doonka ay ku tiirsan yihiin si ay u hubiyaan cuntada qoysaskooda.
Ma dhab baa in WFP ay joojinayso gargaarkii ay siin jirtay qaxootiga qaarkood?
WFP waxa soo food saartay dhaqaale yari taasina waxay keentay in ay ku qasbanaato in ay meesha ka saarto qaar ka mid ah ka faa’iidaystayaasha loo arkay in aanay ka mid ahayn kuwa ugu nugul. Ka-faa’iideystayaashii aan ka bixin gargaarkii cuntada saddex bilood oo isku xigta ayaa sidoo kale laga saaray. Si loo hubiyo isticmaalka ugu wanaagsan ee maalgelinta la hayo, mudnaanta waxaa la siiyaa bixinta gargaarka cuntada kooxaha iyo kooxaha aadka u nugul ee wajahaya khataro ilaalin daran.
Sideed u go'aansanaysaa cidda u qalanta in la siiyo kaalmada WFP?
Guud ahaan, u-qalmitaanka helitaanka cuntada gargaarka ah waxaa lagu go’aamiyaa habka bartilmaameedka, kaas oo ku xiran ilo badan oo macluumaad ah, oo ay ku jiraan macluumaadka la heli karo marka aad iska diiwaan geliso UNHCR, iyo mararka qaarkood macluumaadka lagu ururiyo wareysiyada qiimeynta. Go’aanku wuxuu tixgalinayaa dhowr arrimood oo la isku daray, oo ay ku jiraan xaaladda dhaqaale, tirada xubnaha qoyska, fududaynta helitaanka kaalmooyinka kale, baahiyaha gaarka ah, khatarta ilaalinta, xaaladaha caafimaad, iyo arrimo kale oo badan. Kadib, dhammaan kiisaska waxaa la barbardhigayaa in la aqoonsado qoysaska aadka u nugul, kuwaas oo ka hooseeya khadka faqriga oo aad ugu nugul khatarta ilaalinta marka loo eego kuwa kale.
Barnaamijka Cunnada Adduunka ayaa sii wadi doona bixinta gargaarka cuntada ee kuwa aadka u nugul.
Kiisaska laga saarayo waa kuwa ugu nugul, kuwaas oo ka sarreeya xariiqa faqriga, aan la kulmin khataro ilaalin, oo hubin kara baahidooda ugu yar ee cuntada. Waxaa lagu aqoonsaday iyadoo lagu salaynayo dib u eegis dhamaystiran oo lagu sameeyay xogta macluumaadka ee la heli karo laga bilaabo 2014.
Si loo awoodo in ay caawiso qoysas badan intii suurtagal ah, WFP waxa ay ku dabaqi doontaa saqafka 5 xubnood qoyskiiba kaalmada la bixiyo. Xubnaha dheeraadka ah ee qoyska ayaa laga saarayaa kaadhadhka kaalmada. (Tusaale ahaan qoyska ka kooban aabbe, hooyo iyo shan carruur ah waxay heli doonaan oo keliya gargaar u dhiganta 5 qof.)
Ma jirtaa hab rafcaan looga qaadan karo go'aankan?
Haa WFP waxa ay leedahay nidaam racfaan. WFP iyo la-hawlgalayaasheeda ayaa dejin doona qaab-dhismeedka racfaanka si ay u oggolaadaan rafcaannada kuwa laga saaray gargaarka. Nidaamku wuxuu ku dhisan yahay dib-u-qiimaynta nuglaanshaha qoyska rafcaanka ah iyo xaaladdiisa haqab-beelka cuntada taasoo saldhig u ah oggolaanshaha rafcaanka iyo dib-u-gelinta ku-darka kaalmada.
Foom ay samaysay WFP haddii lagaa hakiyay kaalmada oo aad rabto in aad rafcaan ka qaadato, fadlan gal xiriirkan oo raac tilmaamaha: https://forms.office.com/r/NHRwKvdgiV. Codsiyada Racfaanka waa in lagu helaa muddo rafcaan ah oo ah laba bilood gudahood marka la ogeysiiyo ka saarida.
Intee in le'eg ayay qaadataa habka racfaanka?
Go’aanka ku saabsan racfaankaaga waxaa lagu gaari doonaa 70 maalmood gudahood waana lagu soo sheegi doonaa.
Suurtagal ma tahay in la diido natiijada racfaanka?
Haddii WFP ay hesho lacag dheeraad ah ma kordhinaysaa tirada kuwa aad caawiso mar labaad?
WFP waxay had iyo jeer u heellan tahay inay taageerto dadka ugu badan ee suurtogalka ah laakiin waxay mar walba sii ahaan doontaa inay ka go’an tahay inay taageerto kuwa ugu nugul. Waxaan si joogto ah uga shaqeyneynaa abaabulka agabka iyo dhaqaale badan waxaan awoodnaa inaan gaarno dad badan oo u baahan taageeradayada. Si kastaba ha ahaatee, waxaa muhiim ah in la ogaado in WFP ay hesho lacag badan aysan macnaheedu ahayn in si toos ah dib loogu daro liisaskayada gargaarka.